तपाईंलाई थाहा छ ।प्याजको रसले यसरी लामो, बाक्लो र चम्किलो बनाउ छ, कपाल!!! – News Nepali Dainik
तपाईंलाई थाहा छ ।प्याजको रसले यसरी लामो, बाक्लो र चम्किलो बनाउ छ, कपाल!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७ समय: २०:४२:२४
प्याजमा पाइने सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ जसले कपालको विकासमा मद्दत गर्दछ । त्यसकारण धेरैजसो मानिसहरु कपाललाई लामो बनाउनका लागि प्याजको रस लगाउने गर्दछन् । प्याजमा पाइने एन्टी–ब्याक्टेरियल गुणका कारण यसको रस कपालमा लगाउँदा कपाल झर्न रोकिने र टाउकोको संक्रमण आदिबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ ।
बीयरले तपाईंको कपाललाई प्राकृतिक रुपमा चम्किलो बनाउँछ । प्याजको रसलाई बियरमा मिसाएर लगाउँदा कपाल निकै चाँडै बढ्नुका साथै चम्किलो पनि हुन्छ । कपाललाई बढाउनका लागि यो उपायलाई एक हप्तामा दुई पटक प्रयोग गर्नुहोला
Last Updated on: February 3rd, 2021 at 8:42 pm
२२३० पटक हेरिएको